Epiphany School | Boston School Finder
Gaar looleeyahay5aad - 8aad
154 Centre Street, Dorchester
Xiliga Biloowga/Dhamaadka 7:45am-3:30pm
Dugsiga Kahor 7:15am-7:45am
Dugsiga Kadib 3:15pm-6:15pm
Lambarka Taleefanka 617-326-0425
Diiwaangalinta waxaa lagu go'aanshaa hanaan bakhtiyaa nasiib ah oo lacag la'aan ah.
Bakhtyaa nasiibku wuxuu furmayaa bisha Abriil 1, 2019 ardayda ladiiwaangalinaayo bisha Sebteembar 2019
Dhagsii qaybta hoose ee Enroll in Lottery si aad ugasho qaybta codsiga bakhtiyaa nasiibka.
Epiphany waa dugsi lacag la'aan ah oo madax banaan kuna yaala Boston oo laguna dhigto fasalada 5-8. Waxaa lagu codsadaa hanaan bakhtiya nasiib ah oo lagu qoro ardayda fasalka 5aad. Dhamaan ardaydu waa inay uqalmaan qadada bilaashka ama raqiiska ah ee uu baxsho Gobalka Massachusetts, waana inay dagan yihiin Boston.
Epiphany waa dugsi madax banaan oo loogu talagalay caruurta qoysaska danyarta ah ee kunool Boston ayadoo lasiiyo taageero dhaqaale dhamaan ardayda. Waxaan aqbalnaa caruurta kasoo kalajeeda diimaha, isirada, dhaqanada, iyo aqoonsiyada fahanka kaladuwan leh, anagoo aaminsan in dhaqanka Episcopal oo ah inaan ajar kahelno gudaha iyo iyo adeegga qofkasta, waxaan kudhiirigalinaynaa ardaydeena si ay ubartaan una kobcaan heerka ugu sareeya ee aqoontooda. Fasalada Epiphany ee oo kooban, manahajka gaarka ah, iyo maalmo dugsiyeed dheeri ah ayaa bixinaaya casharo adag tacliin ahaan, mooraal aahan io bulsho ahaan. Anagoo laleh iskaashi dhaw qoysaska, waxaan nahay bulsho waxbarasho oo leh hal abuur taasoo bixisa taageero nidaamsan oo lagu caawinaayo ardayda. Markaan gacmaha isqabsano waxaan nahay dugsi aan marna karaja dhigin ilmaha. Epiphany wuxuu tababaraa macalimiinta magaalada oo dhiirigalin leh wuxuuna siiyaa taageero ardayda kaqalin jabisa kuwaasoo udiyaarsan inay door kuyeeshaan caqli ahaan, mooraal ahaan, iyo shaqo ahaanba bulshada ay dhaxlayaan.
Quraac, caawimaada layli gurigga aaa labaxshaa
Caawimaada layli gurigga, ciyaaro, casho